India, Fifididanana 2009 : Fandraisana Anjara Ambany Noho Ny Nandrasana, Fanontaniana Momba Ny Fampielezankevitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2018 11:38 GMT
Sary natolotr'i Chhavi Schdev tamim-pitiavana
Anton-dresaky ny tontolon'ny bilaogy indiana sy ireo haino aman-jery mahazatra ireo adihevitra momba ny anton'ny nampidina ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy ho 44.,21% tany Mumbai, na teo aza ireo hetsika maro natao hanoratana ny anaran'ny mpifidy, toy ny Jaago Re sy ny hetsiky ny fangaraharàna toy ny Vote Report India.
Miezaka manazava ny antony tsy nifidianan'ny mpifidy tao Mumbai ny ankamaroan'ny mpaneho hevitra (Fanamarihana: antsoina hoe Mumbaikars ny olona monina ao Mumbai)
Tao amin'ny adihevitra nokarakarain'ny fantsona CNBC-TV18, dia miezaka manazava ny fahambanian'ny fandraisan'ny mpifidy anjara ao amin'io tanàna io ireo mpilatsaka ho fidiana avy amin'ny tsy miankina Meera Sanyal, Madhav Bhatkuly avy amin'ny Empowered Mumbai ( Mumbai Matanjaka), B Venkatesh Kumar avy amin'ny oniversiten'i Mumbai ary Vivek Gilani avy amin'ny MumbaiVotes.
Hazavain'ny IANS fa ny resaka politika ao an-toerana ihany izay tsy asongadin'ny fampielezankevitra no mahaliana ireo mpifidy ao Mumbai, izany no mampihena ny tahan'ny fandraisana anjara. Tantarain'i Neha Bagoria ao amin'ny Twitter fa ny ankamaroan'ny tanora mpifidy nahita fianarana ao Mumbai dia avy any amin'ny fanjakana hafa ka tsy afaka mifidy ao satria tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisi-pifidianana. Eritreretin'i Niyukti ao amin'ny Twitter fa ny tsy firaharahian'ny mpifidy ny “politika taloha tsy miova” sy ny hafanana be no antony roa manazava io fihenan'ny taham-pahavitrihana any Mumbai io. Heverin'ny Bombay Addict fa ny tsy fihetsehan'ny saranga afovoany no antony iray mampihena io taham-pahavitrihana io.
“Angamba taratry ny tsy fahombiazan'ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana io fihenan'ny taham-pavitihana io fa tsy ny tsy fihetsehan'ny mpifidy”, hoy i Harshad Oak . Tsikerain'i Neelakantan ihany koa ny fomba fanavaozana ny lisitry ny mpifidy. Lazain'i Amit fa ny fahasimban'ny milim-pifidianana sy ireo anarana mpifidy tsy hita dia tsy azo atao fialantsiny tsy hisisihana hanao fifidianana..
Velabelarin'i Randheer Singh ny teorian'ny tsikombakomba iray momba ny antony tsy hifidianan'ny indiana amin'ny saranga afovoany. Maniry ny hanaovana fanadihadiana lalindalina kokoa momba ny Soritraretin'ny tsy fisian'ny indiana mpifidy ny The Acron ao amin'ny National Interest..
Tezitra sady malahelo i Mohyna Srinivasan sy Vrushali Lad satria vitsy ireo mpifidy tao Mumbai no nandray anjara tamin'ny fifidianana. Kamal Chaturvedi izy tenany dia tsy nifidy, nefa nolazainy fa lany henatra ireo mpifidy tany Mumbai tsy nifidy.
Zarain'i Subin, Dina Mehta, Chhavi Sachdev ary Kayezad Adajania ny zavatra niainan-dry zareo tamin'izy ireo vao nifidy voalohany. Mampalahelo ny fahatsapana fa tsy hita ny anaran'ny mpifidy, ny mahita ireo tompon'andraikitra misahana ny fifidianana misavoritaka ary ny fikarakaràna tsy tomombana. Afaka nifidy mora ilay mpilatro lasa mpanoratra Shobha De. Manazava ny antony tsy nahafahany nifidy voalohany tamin'ny 1992 i Rajesh Jain, satria tsy tao anaty lisi-pifidianana ny anarany. Hazavain'i Priya Ramani ao amin'ny LiveMint ny anton'ny tsy nifidianany.
Tombanan'ny vondrona sasany fa hadisoana hatrany amboalohany ny fiandrasana ny fiakaran'ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy any Mumbai.
Tsy gaga amin'ny hakelezan'ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy ny mpanoratra matoandahatsoratra Vir Sanghvi no sady manamafy fa manonofy isika raha mino fa ny fanafihan'ny mpampihorohoro taty Mumbai no tokony hanaitra ny fahatsiarovantenan'ireo tanora an-drenivohitra amin'ny maha-olom-pirenena azy. Kianin'i Ananth Krishnan ny fampanantenana diso momba ny fiakaran'ny taham-pahavitrihana napetrak'ireo haino aman-jery. Ireo saranga ambony no kendren'ny ezaka lehibe amin'ny fanabeazana ho isam-bahoaka fa tsy ny sarambabem-bahoaka izay mandrafitra ny ankabeazan'ny mpifidy hoy ny fanazavan'i Kaushal Karkhanis ao amin'ny Twitter.
Farany, misy vondrona olona fahatelo miezaka mikaroka vahaolana mba hamporisihana ireo mpifidy handray anjara bebe kokoa amin'ny manaraka.
Manontany ireo mpamaky azy i Rediff raha toa ka tena tsy maintsy atao ny fifidianana any India, raha jerena ny fahakelezan'ny taham-pavitrihana. Mohit Atale dia mino fa tsy hisy hitondra ho amin'ny fanondrotana ny taham-pifidianana ny ” na izay aza tamin'ireo safidy natolotra tery ambony” .
Fa raha izaho, dia mino aho fa tsy mbola nisy fifidianana tahaka ity taty India raha resaka fisoratan'ny mpifidy anarana tamin'ny aterineto, fangaraharana ary ireo hetsika tsy nalain-tahaka.
Niteraka ny hatezerana niseho taorian'ireo fanafihana mampihorohoro tao Mumbai ireo hetsika ireo, tamin'ny famadihana izany ho adihevitra mahasoa sy famoronana sehatra fandraisan'ny olom-pirenena andraikitra amin'ny aterineto. Noho io onjam-pifandraisana io no nahatonga ireo olona ambony toa an'i Shashi Tharoor, ilay mpandihy Mallika Sarabhai, ary ilay tompon'ny banky indiana ABN AMRO, Meera Sanyal, niditra an-tsehatra handray anjara tamin'ny fifidianana.
Angamba tsy nampiakatra be ny taham-pahavitrahana io hetsika io, saingy nametraka fototra izy io ny amin'ny handraisan'ny tanora an-drenivohitra ao amin'ny saranga afovoany andraikitra amin'ny olana goavana momba ny maha-olom-pirenena. Mora kokoa ny miady hevitra noho ny manao asa, saingy tsy maintsy ialohavan'ny asa iombonana ny fandraisana andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena. Tsingerina hitanay tany Etazonia izany. Tamin'ny 2004, tsy nahatanteraka ny fanendrena an'i Howard Dean [ho mpilatsaka ho fidiana avy amin'ny demokraty ], na tamin'ny fifidianana an'i John Kerry ho filoha, fa saingy nametraka ny fototry ny mpikatroka mavitrika amin'ny aterineto izy io, izay notrandrahan'i Barack Obama tamin'ny 2008. Mitovy amin'ny an'i Etazonia tamin'ny 2008 ny fifidianana indiana 2009.
Angamba hanatrika ny fipoiran'ny mpitarika mpanao fahagagana izay hifantoka amin'ny fisainan'ny tanora indiana eo amin'ny sehatra nasionaly isika amin'ny 2014. Ao anatin'ireo fifidianana ireo, na ny Antokon'ny kongresy, na ny BJP dia tsy nanana olona atolotra ho praiministra mpanao fahagagana araka izay ao an-tsainy. Ankoatra izay, diso fanantenanana tamin'ny fisolelahana tao anatin'ny kongresy ireo tanora indiana, mailo manoloana ny politikan'ny herisetran'ny BJP eny anivon'ny fifidianana ben'ny tanàna ary mitebiteby amin'ny fisaratsarahana amin'ny politika indiana vokatry ny fitomboan'ny herin'ireo antoko any amin'ny faritra. Izany no antony nisian'ireo adihevitra ao amin'ny Sampana faha-49 (O) sy ny vato miiba hatramin'izay nisian'ny fanafihana mampihorohoro tany Mumbai izay. Antenaintsika fa hiova izany amin'ny 2014.
Isan'ny fandrakofana manokana nataon'ny Global Voices momba ny fifidianana 2009 tany India ity lahatsoratra ity
Navoaka ihany koa tao amin'ny Gauravonomics, bilaogiko momba ny haino aman-jery sosialy sy ny fiovàna sosialy.